कोरोनाको तेस्रो लहरमा कसरी जोगाउने बालबालिकालाई ? यस्ता छन् डाक्टरका सुझाव - tilottamacitynews
तिलोत्तमा सिटी - 2021 Jun 08 08:16 PM Tweet
डा. सेफाली गुलाटी
कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरमा धेरै बालबालिकाहरु संक्रमित बनिरहेका छन् । पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहर बालबालिकाका लागि संक्रामक देखिएको अवस्थामा अर्को नयाँ लहर आएमा बालबालिकाहरुका लागि निकै खतरनाक हुने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्थामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट, बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थाका विषयमा अभिभावकहरुमा चिन्ता थपिइरहेको छ ।महामारीको समयमा अभिभावकहरुले के गर्ने ? के नगर्ने ? अभिभावकहरु संक्रमित भएको अवस्थामा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? अनि बालबालिकाहरु नै संक्रमित भएमा के गर्ने ? डाक्टर शेफाली गुलाटीले इण्डियन एक्सप्रेसमा यस्तै जिज्ञासाहरुको जवाफ दिएकी छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहरले बढी बालबालिकाहरुलाई असर गर्ने धेरै विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । सिंगापुरमा यस्तो भैसकेको पनि छ । हामीले भाइरसविरुद्ध प्रतिरक्षा हासिल गर्ने भनेको कि त खोप लगाएर हो, कि त एकपटक संक्रमित भैसकेपछि हो ।धेरै वयस्क मानिसहरु पहिलो तथा दोस्रो लहरमा संक्रमित भैसकेका छन् । हालसम्म खोपहरु केवल वयस्कहरुको प्रयोगका लागि मात्र स्विकृत भएका छन् । पहिलो लहरमा संक्रमित भएका बालबालिकाहरुको संख्या भन्दा दोस्रो लरहमा संक्रमितहरुको संख्या धेरै छ । यसको कारण चाहीँ समग्रमा संख्या नै धेरै हुनु र सबै परिवार नै संक्रमित भएका कारण पनि हुनसक्छ ।
भाइरस संक्रमणको सम्भावनाका हिसाबले बालबालिकाहरु वयस्कजत्तिकै जोखिममा हुन्छन् । तथापि कोभिड १९ संक्रमित बालबालिकाहरु साधारणतया लक्षण विनाका वा कम गम्भीर खाले लक्षण भएका हुने गरका छन् । बालबालिकाहरुमा भाइरसको असर कम हुनुको कारण चाहीँ भाइरस संक्रमण हुने तरिकाका साथै बालबालिकाको रोग प्रतिरोधी प्रणालीका कारणले हुनसक्छ ।अध्ययन अनुसार खासगरी १ वर्षमुनिका र १० देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाहरु कडा लक्षण सहितको कोभिड १९ संक्रमण हुने उच्च जोखिम समूहमा पर्दछन् । शिशुहरु संक्रमित भएमा गम्भीर विरामी पनि पर्न सक्दछन् । त्यस्तै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुमा २ देखि ६ हस्तासम्मको लक्षणवीहिन वा लक्षणयुक्त कोभिड संक्रमणपछि मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम देखिन सक्छ ।खासगरी १ वर्षमुनिका र १० देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाहरु कडा लक्षण सहितको कोभिड १९ संक्रमण हुने उच्च जोखिम समूहमा पर्दछन् ।
सबैभन्दा आम लक्षणहरु भनेका ज्वरो (६३ प्रतिशत), खोकी (३४ प्रतिशत) र त्योसँगै वाकवाकी तथा वान्ता (२० प्रतिशत) र झाडापखाला (२० प्रतिशत) रहेका छन् । वयस्क मानिसहरुमा जस्तै बालबालिकाहरुमा पनि कोभिडका मुख्य लक्षणमा ज्वरो र खोकी नै पर्दछ । तर बालबालिकामा त्यस्तो लक्षण देखिने दर वयस्कमा भन्दा निकै कम हुन्छ ।अधिकांस बालबालिकामा न्यून तथा मध्यम खालको लक्षण देखिन्छ र केवल ४ प्रतिशतमा मात्रै कडा खालको विमारी हुन्छ । त्यस्तै वयस्कहरुमा छिटो छिटो स्वास फर्ने, अक्सिजन लेवल घट्ने तथा थुक उत्पादन जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् । वयस्कमा जस्तै झाडापखाला तथा वान्ता हुने जस्ता लक्षणहरु बालबालिकामा पनि देखा पर्दछन् । र कहिलेकाहीँ त कोभिड १९ संक्रमणको एकमात्र लक्षणको रुपमा झाडावान्ता लाग्ने गरेको पनि पाइन्छ । समग्रमा सुरुमा स्वासप्रस्वासजन्य र बढी पाचन प्रणालीजन्य लक्षणहरु बालबालिका र वयस्क दुबैमा कोभिडका लक्षणको रुपमा रहने गरेका छन् ।
कोभिड १९ संक्रमणको आशंका भएका वा पुष्टि भएका र ज्वरो, खोकी तथा फ्यारिन्जाइटिस जस्ता सामान्य खालका लक्षण देखिएका बालबालिकालाई सामान्यतया घरमै व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दम, मुटुको रोग, मधुमेह, छारे रोग तथा मांशपेशीजन्य लगायतका रोग भएका संक्रमित बालबालिकालाई चाहीँ तत्कालै अस्पताल लैजानु पर्दछ । किनकी पहिले देखिनै अर्को रोगबाट ग्रसित भैरहेका बालबालिकाहरुमा कोभिड १९ को संक्रमणले सिकिस्त बिरामी पार्ने जोखिम हुन्छ ।संक्रमितको घरमै गरिने व्यवस्थापन अन्तरगत संक्रमित वा आशंकितलाई आइसोलेसनमा राखेर अरुलाई रोग सर्न नदिने, उसको निरन्तर निगरानी गरिरहने र लक्षणहरुको बारेमा जानकारी लिइरहने, आडभरोसा दिने र पोषणयुक्त खानेकुरा र डाक्टरहरुको सल्लाह बमोजिम औषधि आवश्यक परेमा खुवाउने ।
यदि तपाइँ कोभिड १९ संक्रमित हुनुहुन्छ भने आफ्ना बच्चालाई छुनु वा अँगालो हाल्नु भनेको उनीहरुलाई जोखिममा पार्नु नै हो । हुनत सानो उमेरका बच्चाहरुलाई आफुभन्दा टाढा बस्ने बानी पार्नु निकै कठीन हुन्छ । यदि तपाइँ बच्चासँग एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ भनेपनि ऊसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउन तर सम्पर्क कायमै राख्नका लागि नयाँ उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि बच्चासँग फोनमा कुरा गर्ने, भिडियो कल गर्ने तथा इमेल आदान प्रदान गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्ना बच्चासँग नियमित रुपमा फोनमा कुराकानी गर्नका लागि परिवारका सदस्यहरु वा साथीलाई पनि भन्नुहोस् ।अमेरिकाको सेन्टल फर डिजिज कन्ट्रोलका अनुसार २ वर्ष भन्दा माथिल्लो उमेरको जो सुकै बच्चाले पनि लगाएको मास्क आफै फ्याँक्न सक्दछ । त्यसैले स्वासप्रस्वासको समस्या नभएका सबैजनाले यदि घरमा कुनै संक्रमित व्यक्ति छ भने अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्दछ । घरका सतहरुमा नियमित रुपमा डिसइन्फेक्सन गर्नु पर्दछ । आफु र आफ्नो बच्चाबीच कम्तिमा ६ फिटको दूरी कायम गर्नु पर्दछ ।
अभिभावकहरुले आफ्ना स साना बच्चाहरुका लागि समय छुट्टाउनु पर्दछ र त्यस्तो समयमा अन्य कुरामा नअल्झिने, सकारात्मक कुराकानी गर्ने र बालबालिकाहरुलाई ढाडस दिने गर्नुपर्दछ ।
विभिन्न ३१ देशका ९ हजार ३३५ जना संक्रमित बालबालिकामा गरिएको एक अध्ययनले १२ प्रतिशत बालबालिकामा स्नायुजन्य समस्याका लक्षणहरु देखा परेको पाइएको छ । त्यसमध्ये २ प्रतिशत बालबालिकामा चाहीँ इन्सेफ्यालोप्याथी, स्ट्रोक, मध्य स्नायु प्रणालीमा संक्रमण जस्ता घातक लक्षणहरु पनि देखिएका छन् ।अझ विशेष अवस्था वा आवश्यकताका बालबालिकामा कोभिड संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको छ भने स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचमा कमी, स्कूल बन्द हुँदा पुनस्र्थापनाको उच्च आवश्यकता, रोकथामजन्य उपायहरु अबलम्बनको क्षमतामा कमी जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । स्नायु प्रणालीको विकास सँग सम्बन्धित लामो समदेखिको समस्या भएका बालबालिकाहरु कोभिड १९ को कारण मानसिक विकासात्मक सुस्तताको बढी जोखिममा रहेका छन् । दुई वर्ष भन्दा मुनिको बच्चालाई कहिल्यैपनि मास्क लगाइदिनु हुँदैन । तथापि बच्चालाई अनावश्यक सार्वजनिक सम्पर्कमा नल्याउनुहोस् ।
बच्चा कोभिड संक्रमणबाट मुक्त भएको वा लक्षणवीहिन भएको २ हप्तापछि मात्र अन्य नियमित खोपहरु बच्चालाई लगाउन सकिन्छ । यदि बच्चालाई उच्च डोजको स्टेरोइड औषधि लगायतका रोग प्रतिरोधी क्षमता घटाउने खालको उपचार गरिएको भएमा यस्तो उपचार सकिएको ३ महिनापछि मात्र नियमित खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ।
आफु, आफ्नो सानो शिशु तथा अन्य सन्तानहरुलाई अरु मानिसहरुभन्दा ६ फिट टाढै राख्नुहोस् । बालबालिकालाई घरमै राखेर आफु बाहिर निस्किनुपर्ने भएमा सकेसम्म छिटै घर फर्किनुहोस् । आफ्नो सानो बच्चालाई लिएर सार्वजनिक ठाउँहरुमा जानुपर्ने भएमा बच्चा बोक्ने स्ट्रोलरलाई पातलो ब्लांकेटले छोप्ने गर्नुहोस्, तर बच्चालाई छोप्ने होइन ।आफ्नो बच्चालाई एक्लै नछाड्नुहोस् आफ्नो हात सधे सफा राख्ने । घर आउने बित्तिकै आफु तथा आफ्ना अन्य बच्चाको हात धुन नबिर्सिने । हात धोएर मात्रै शिशुलाई छुने। घरमा प्रायः छोइरहने सतहहरु दिनमा नियमित रुपमा डिसइनफेक्टेन्ट स्प्रे तथा वाइपरले सफा गरिरहने । कुरा बुझ्ने उमेरका बालबालिकालाई हातले अनुहार छुने बानीलाई छाड्न लगाउने ।